【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】Rota virus ဝမျးပကျြဝမျးလြှောရောဂါ | Opinion Leaders
Rota virus ကွောငျ့ဖွဈသော ဝမျးပကျြ ဝမျးလြှောခွငျးဖွဈသညျ။ အသကျငါးနှဈအောကျကလေးငယျမြားတှငျ အဖွဈမြားပွီး အသကျတနှဈအောကျကလေးငယျမြားတှငျ ဖွဈပှားပါက ပွငျးထနျတတျပါသညျ။
Rota ဗိုငျးရပျဈပိုးသညျ မစငျမှတဈဆငျ့ အစားအစာ၊ ရနှေငျ့ ကလေးကစားစရာမြားဆီသို့ ပြံ့နှံကာ ပါးစပျအတှငျးသို့ဝငျရောကျသော နညျးလမျးဖွငျ့ ကူးစကျပါသညျ။ ရောဂါပိုးရှိသော ကလေးဟာ ဝမျးမပကျြခငျ ၂ရကျမှစပွီး ဝမျးပကျြပွီး ၁၀ရကျလောကျအထိ ဝမျးထဲမှာ ဒီပိုးကို စှနျ့ထုတျနိုငျပါတယျ။ ကိုယျခန်ဓာပွငျပမှာ ၉ရကျမှ ၁၉ရကျအထိ ရှငျသနျနိုငျပါတယျ။
Rota ဗိုငျးရပျဈဝမျးပကျြဝမျးလြှောရောဂါကို ကလေးတိုငျးလိုလို အသကျငါးနှဈအတှငျး အနညျးဆုံး တဈကွိမျခနျ့ဖွဈဖူးကွပီး အသကျ၅ နှဈအောကျကလေးမြားတှငျ ရောဂါကူးစကျလှယျပါသညျ။ အသကျ၅နှဈအထကျနှငျ့ လူကွီးမြားတှငျမူ ခုခံကာကှယျနိုငျစှမျးရှိ၍ လှယျကူစှာ မကူးစကျနိုငျပါ။
(ကလေးငယျမြားတှငျ မြားသောအားဖွငျ့ အနညျးငယျမအီမသာဖွဈခွငျးမှာ ၃ရကျမှ ၈ရကျအထိ ကွာမွငျ့တတျသညျ)
အထူးသတိပွုရနျမှာ ရဓေါတျခနျးခွောကျသော လက်ခဏာမြားဖွဈသညျ-
-မကျြတှငျးခြို့ငျ့ခွငျး၊ ငယျထိပျခှကျခွငျး စတဲ့ ရဓေါတျဆုံးရှုံးတဲ့ လက်ခဏာတှေ သငျ့ကလေးငယျမှာရှိလာရငျတော့ ပွငျးထနျဝမျးပကျြဝမျးလြှောခွငျ့းဖဈပီး အသကျသဆေုံးနိုငျပါသညျ။ Rota ဗိုငျးရပျဈဝမျးပကျြဝမျးလြှောရောဂါသညျ ကလေးငယျမြားတှငျ တဈကွိမျထကျပို၍ ဖွဈနိုငျပါသညျ။ သို့သျော ပထမအကွိမျရောဂါဖွဈခွငျးလောကျ ပွငျးထနျမှုမရှိပါ။ ကလေးငယျ၏ ခန်ဓာကိုယျတှငျး Rota ဗိုငျးရပျဈခုခံကာကှယျနိုငျစှမျး အတနျအသငျ့ရရှိမှုကွောငျ့ ဖွဈသညျ။
Rota ဗိုငျးရပျဈကို ကာကှယျနိုငျပါသလား?
Rota ဗိုငျးရပျဈ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောရောဂါသညျ ပွငျးထနျလြှငျ ကလေးငယျ အသကျသဆေုံးသညျအထိ ဖွဈနိုငျသောကွောငျ့ ကွိုတငျကာကှယျသငျ့ပါသညျ။ ယခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလမှ စတငျကာ ပုံမှနျကာကှယျဆေးထိုး၊ ဆေးတိုကျအစီအစဉျတှငျ အသကျ၂လနှငျ့ ၄လအရှယျ ကလေးငယျမြားကို Rota ဗိုငျးရပျဈကာကှယျဆေး ကို ထညျ့သှငျးတိုကျကြှေးနပေီဖွဈသညျ။
Rota ဗိုငျးရပျဈကာကှယျဆေး အကွောငျး
ထိုးဆေးမဟုတျပါ။ အစောဆုံး အသကျတဈလခှဲကစလို့ တိုကျကြှေးနိုငျသညျ။ ကလေးအသကျ ၂လ-၄လ-၆လ အရှယျမြားတှငျ သုံးကွိမျပါးစပျမှ တိုကျကြှေးနိုငျသညျ။ ပုံမှနျကာကှယျဆေးထိုး ဆေးတိုကျအစီအစဉျတှငျမူ အသကျ၂လနှငျ့ ၄လအရှယျမြားတှငျသာ နှဈကွိမျသာ ထညျ့သှငျးထားသညျ။ ကာကှယျဆေးတိုကျပွီးနောကျ သာမနျကာကှယျဆေးတုံ့ပွနျမှုမြား (ဂြီကခြွငျး၊ အနျခွငျး၊ ဝမျးလြှောခွငျး) တခါတရံဖွဈတတျသညျမှလှဲ၍ ပွငျးထနျသော ဘေးထှကျဆိုးကြိုးမရှိဘဲ အန်တရာယျကငျးပါသညျ။
မထိုးသငျ့သော ကလေးငယျမြား ရှိပါသလား?
-ယခငျအကွိမျ တိုကျကြှေးစဉျက ပွငျးထနျစှာ ဓါတျမတညျ့ခွငျးဖွဈဖူးသူမြား၊ ပွငျးထနျစှာ ခုခံအားကဆြငျးနသေော ကလေးငယျမြားတှငျ မတိုကျကြှေးသငျ့ပါ။
-ကလေးဖြားနာခွငျး၊ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောဖွဈခွငျး သို့မဟုတျ အနျနလြှေငျ ကလေးအခွအေနသေကျသာမှသာ ကာကှယျဆေးတိုကျသငျ့ပါသညျ။
-အူစှတျဝငျခွငျး (Intussusception) ဖွဈဖူးသညျ့ ကလေးငယျမြား၊ သို့မဟုတျ အူလမျးကွောငျးပုံမှနျမဟုတျသော ကလေးမြားတှငျ ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျပွီးမှ ကာကှယျဆေးထိုးသငျ့ပါသညျ။
ကာကှယျဆေးသညျ Rota ဗိုငျးရပျဈကွောငျ့ဖွဈသော ဝမျးလြှောခွငျးကိုသာ ကာကှယျနိုငျပွီး အခွားပိုးမြားကွောငျ့ဖွဈသော ဝမျးပကျြဝမျးလြှောခွငျးမြားကို မကာကှယျနိုငျပါ။ ဒါကွောငျ့ လကျခဏခဏဆေးခွငျး၊ တကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးဂရုစိုကျခွငျး၊ ရသေနျ့ သို့မဟုတျ ရကေိုကြိုခကျြသောကျခွငျး၊ အသကျ၆လအထိ မိခငျနို့တဈမြိုးတညျး တိုကျကြှေးခွငျး စတာတှဖွေငျ့လညျး ဝမျးမလြှောအောငျ ဂရုစိုကျသငျ့ပါသညျ။
Rota virus ကြောင့်ဖြစ်သော ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောခြင်းဖြစ်သည်။ အသက်ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်များတွင် အဖြစ်များပြီး အသက်တနှစ်အောက်ကလေးငယ်များတွင် ဖြစ်ပွားပါက ပြင်းထန်တတ်ပါသည်။
Rota ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည် မစင်မှတစ်ဆင့် အစားအစာ၊ ရေနှင့် ကလေးကစားစရာများဆီသို့ ပျံ့နှံကာ ပါးစပ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သော နည်းလမ်းဖြင့် ကူးစက်ပါသည်။ ရောဂါပိုးရှိသော ကလေးဟာ ဝမ်းမပျက်ခင် ၂ရက်မှစပြီး ဝမ်းပျက်ပြီး ၁၀ရက်လောက်အထိ ဝမ်းထဲမှာ ဒီပိုးကို စွန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ခန္ဓာပြင်ပမှာ ၉ရက်မှ ၁၉ရက်အထိ ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။
Rota ဗိုင်းရပ်စ်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါကို ကလေးတိုင်းလိုလို အသက်ငါးနှစ်အတွင်း အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ်ခန့်ဖြစ်ဖူးကြပီး အသက်၅ နှစ်အောက်ကလေးများတွင် ရောဂါကူးစက်လွယ်ပါသည်။ အသက်၅နှစ်အထက်နှင့် လူကြီးများတွင်မူ ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိ၍ လွယ်ကူစွာ မကူးစက်နိုင်ပါ။
(ကလေးငယ်များတွင် များသောအားဖြင့် အနည်းငယ်မအီမသာဖြစ်ခြင်းမှာ ၃ရက်မှ ၈ရက်အထိ ကြာမြင့်တတ်သည်)
အထူးသတိပြုရန်မှာ ရေဓါတ်ခန်းခြောက်သော လက္ခဏာများဖြစ်သည်-
-မျက်တွင်းချို့င့်ခြင်း၊ ငယ်ထိပ်ခွက်ခြင်း စတဲ့ ရေဓါတ်ဆုံးရှုံးတဲ့ လက္ခဏာတွေ သင့်ကလေးငယ်မှာရှိလာရင်တော့ ပြင်းထန်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင့်းဖစ်ပီး အသက်သေဆုံးနိုင်ပါသည်။ Rota ဗိုင်းရပ်စ်ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါသည် ကလေးငယ်များတွင် တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ပထမအကြိမ်ရောဂါဖြစ်ခြင်းလောက် ပြင်းထန်မှုမရှိပါ။ ကလေးငယ်၏ ခန္ဓာကိုယ်တွင်း Rota ဗိုင်းရပ်စ်ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်း အတန်အသင့်ရရှိမှုကြောင့် ဖြစ်သည်။
Rota ဗိုင်းရပ်စ်ကို ကာကွယ်နိုင်ပါသလား?
Rota ဗိုင်းရပ်စ် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါသည် ပြင်းထန်လျှင် ကလေးငယ် အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်နိုင်သောကြောင့် ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်ပါသည်။ ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ စတင်ကာ ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုး၊ ဆေးတိုက်အစီအစဉ်တွင် အသက်၂လနှင့် ၄လအရွယ် ကလေးငယ်များကို Rota ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး ကို ထည့်သွင်းတိုက်ကျွေးနေပီဖြစ်သည်။
Rota ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေး အကြောင်း
ထိုးဆေးမဟုတ်ပါ။ အစောဆုံး အသက်တစ်လခွဲကစလို့ တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။ ကလေးအသက် ၂လ-၄လ-၆လ အရွယ်များတွင် သုံးကြိမ်ပါးစပ်မှ တိုက်ကျွေးနိုင်သည်။ ပုံမှန်ကာကွယ်ဆေးထိုး ဆေးတိုက်အစီအစဉ်တွင်မူ အသက်၂လနှင့် ၄လအရွယ်များတွင်သာ နှစ်ကြိမ်သာ ထည့်သွင်းထားသည်။ ကာကွယ်ဆေးတိုက်ပြီးနောက် သာမန်ကာကွယ်ဆေးတုံ့ပြန်မှုများ (ဂျီကျခြင်း၊ အန်ခြင်း၊ ဝမ်းလျှောခြင်း) တခါတရံဖြစ်တတ်သည်မှလွဲ၍ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ အန္တရာယ်ကင်းပါသည်။
မထိုးသင့်သော ကလေးငယ်များ ရှိပါသလား?
-ယခင်အကြိမ် တိုက်ကျွေးစဉ်က ပြင်းထန်စွာ ဓါတ်မတည့်ခြင်းဖြစ်ဖူးသူများ၊ ပြင်းထန်စွာ ခုခံအားကျဆင်းနေသော ကလေးငယ်များတွင် မတိုက်ကျွေးသင့်ပါ။
-ကလေးဖျားနာခြင်း၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အန်နေလျှင် ကလေးအခြေအနေသက်သာမှသာ ကာကွယ်ဆေးတိုက်သင့်ပါသည်။
-အူစွတ်ဝင်ခြင်း (Intussusception) ဖြစ်ဖူးသည့် ကလေးငယ်များ၊ သို့မဟုတ် အူလမ်းကြောင်းပုံမှန်မဟုတ်သော ကလေးများတွင် ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ပြီးမှ ကာကွယ်ဆေးထိုးသင့်ပါသည်။
ကာကွယ်ဆေးသည် Rota ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သော ဝမ်းလျှောခြင်းကိုသာ ကာကွယ်နိုင်ပြီး အခြားပိုးများကြောင့်ဖြစ်သော ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းများကို မကာကွယ်နိုင်ပါ။ ဒါကြောင့် လက်ခဏခဏဆေးခြင်း၊ တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးဂရုစိုက်ခြင်း၊ ရေသန့် သို့မဟုတ် ရေကိုကျိုချက်သောက်ခြင်း၊ အသက်၆လအထိ မိခင်နို့တစ်မျိုးတည်း တိုက်ကျွေးခြင်း စတာတွေဖြင့်လည်း ဝမ်းမလျှောအောင် ဂရုစိုက်သင့်ပါသည်။